ABO: ”Boordii filannootti galmaa’uufi filannoo waggaa dhufuuf qophaa’aa jirra” |
(BBC Afaan Oromoo) — Addi Bilisummaa Oromoo waliigaltee motummaa waliin erga taasise booda darbe darbe mootummaa waliin wal himachuun mul’atus karaa nagaan qabsaa’uuf biyya keessa sosso’aa jira.
Bakkeewwan hedduuttis waajjiraaleen yeroo biyyaa bahe cufamanii turan banamaniiru.
Haala filannoo dhufuuf qophaa’aa jiran irratti Hayyu Duree Itti – Aanaa dhaabichaa Obbo Araarsoo Biqilaa waliin turtii taasisneerra.
Haalli miseensonni waraanaa Xollaay itti jiran ‘gaariidha’
Hoggantoonni dhaabichaa turtii waggaa dheeraa booda biyyatti erga deebi’anii as bakkaa bakkatti sosso’uun ummata dubbisuun alatti ”dabballoota leenjisuun bakka bakkatti ramadaniiru.”
”Gara filmaataa akkamitti deemna kan jedhu irratti hojjechaa jirra,” kan jedhan Obbo Araarsoon waan qabatamaan dhaabi isaanii hojjetaa jiru dubbatu.
”Waajjirri banamaati jira, miseensota ijaaruufi qindeessuu, kaan waan boordii filmaataatiin waan guutamu qabu kan isaan ulaagaatti eegan guuttachuu irratti hojjechaati jirra.”
ABO’n boordii filannootti ‘hin galmoofne’
”Filannoo waggaa dhufuuf qophaa’aa jirra,” kan jedhan Obbo Araarsoon boordiin filannoo ”waan jaarmanni siyaasaa guutuu qabu jedhanitu jira isa guutuuf hojjetaa jirra,” jedhan.
Wanti gaafatame baay’eedha kan jedhan hayyu – duree itti – aanaan dhaabichaa Obbo Araarsoon gaafa kuni xumuramu akka filannoo irratti hirmaatan dubbataniiru.
Waan guutamu qabu waan jirufis hanga yoonaa galmeen dhaabichaa hin xumuramne. ”Waan guttachuu qabnu irra caalaatti goonee jirra, waan hafes immoo itti deemaa jirra.”
Haa ta’u malee, osoo hin galmaa’in bakkeewwan hedduutti waajjiraalee banuun akkamin danda’ame kan jenneen Obbo Araarsoon waligaltee Asmaraatti mootummaa waliin qabaniin akka raawwate himaniiru.
Waajjiraaleen banaman rakkoo waligaltee dhimmi waraanaan kan cufaman kan jiran yoo ta’u akka banaman mootummaa naannoo Oromiyaa bulchu waliin mari’ataa jiraachuullee ibsaniiru.
Dhaaba waggaa dheeraaf qabsoo hidhannoo gaggeessaa turef yeroo gabaabaatti qabsoo karaa nagaa gaggeessuun ni cima ta’a. Salphaa’s ta’u dhiisuu danda’a.
Humni alatti hafe [WBO]waan barbaade gochuun kan isaati jechuudha
Obbo Araarsoo Biqilaa, Hayyu – duree Itti – Aanaa ABO
Gufuuwwanis akka jiran qondaalli ABO kuni ni himu. ”Waldanquufi miila waljalaa fuudhuun bakkaa bakkatti ni jijjira. Kun gufuulee xixiqqoo ammatti jiraniifi duraanis tutturan inuma jiran.”
Yeroo ammaa karaa nagaan qabsaa’uuf haalli mijataa jira kan jedhan Obbo Araarsoon, ta’us ”karaa nagaa yeroo jennu garuu gufuun wayiitu hin jiru jechuus hin dandeenyu,” jedhaniiru.
”Wanneen tokko tokko ademsuma qabsooti. Amni qabsoo karaa nagayaatis waan hedduu qabdi. Bu’aa bayii hedduus qabdi. Hawaasallee, biyyallee barsiisaa deemuu barbaachisa.”
Himannaa ABO tibbanaa
Dhaabichi ibsa kaleessa baaseen qondaaltonni ODP miseensota isaaniif leenjii wayita kennan “ABO’n diina tarsiimoo kiyyaa ti,” jechaa jiru jechun gadduu isaa ibseera.
ABO: ”Waraana dhaabne malee hin hiikkachiisne”
Kana gochuunis dhaabi naannoo Oromiyaa bulchu, ODP’n, akka waadaa paartileen siyaasaa filannoo dura mallatteessan diigetti akka hubatamu qabu akeeka. Gama ganaan ODP irraa wanti dhagahame hin jiru.
”Nuti madda rakkoo ta’udhaaf hin dhufne, rakkina biyyaa furudhaafi. Nuti ilmaan biyyaati, kan qabsaa’aa turres biyyaafi ” jechuun Obbo Araarsoon dubbatu.
ABO fi WBO
Dhimmi waraanaa rakkoo ijoo mootummaa waliin isaan buuse turus boodarra Hayyu – dureen dhaabichaafi ajajaan waligalaa WBO Obbo Daawud Ibsaa Abbootii Gadaatti dabarsani kennu himaniiru.
Waraanni Bilisummaa Oromoo simatamuu ‘eegale’
Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBO) qaama waraanaa Adda Bilisummaa Oromooti. Erga Ebla 01, 2019 as garuu ibsa miidiyaalee hawaasummaa irratti gadhiiseen waraanni dhaaba jalatti akka hin bulle ibseera.
Haa ta’u malee, dhimma kana irratti dhaabichi ibsa baase hin qabu.
Maalif kuni tahe kan jenneen Obbo Araarsoon dhimma waraanaa Koree Teknikaaf erga kennani as waayee waraanaa dubbachuu akka hin dandeenye ibsu.
”Boqonnaa waraanaa sanaan keessaa baane. Humnimmoo alatti hafe waan barbaade gochuun kan isaati jechuudha,” jedhaniiru.
“Hiidhannoo hiikkachuun dhimma mariif dhiyaatu miti”
Waraanni yeroo kana godhu nu waliin hin mari’anne kan jedhan Obbo Araarsoon, erga murteen waraanaa barame asis tarkaanfii dhaabichi fudhate akka hin jirre BBC’tti himaniiru.
”Ammattii waraana wajjiin qunnamtiin qabnu hin jiru,” kan jedhan qondaalli kuni ammaan achi dhimma waraanaa dubbachuun akka itti ulfaatu dubbataniiru.
OMN: Deebanuu [Faaya Najjoo] (Caamsaa 14, 2019)
Previous articleDhaaba Ummatni Jaallatu Diinomsachaa Ummatichatti Firoomuun Hin Danda’amu !
Next articleOMN: Gumaata [furdina]; Deebanuu [Faaya Najjoo]